मृतकलाई झण्डा जीवितलाई डण्डा - प्रशासन प्रशासन
मृतकलाई झण्डा जीवितलाई डण्डा
प्रकाशित मिति : 17 August, 2019 7:47 am
नेपाली राजनीतिको राष्ट्रिय नीति के हो भनेर लोकसेवा आयोगले प्रश्न सोधेमा वा राजनीति सेवा प्रवेश परीक्षामा अलिखित प्रश्न कसैले मलाई तेस्र्याएमा म निर्धक्कसँग जवाफ दिनेछु मृतकलाई झण्डा र जीवितलाई डण्डा नै नेपाली राजनीतिको राष्ट्रिय नीति हो भनेर । पाठकहरू जे सुकै भन्नुस् तर मैले यो कुरा राष्ट्रिय झण्डाका बारेमा होइन पार्टीको झण्डाका बारेमा भन्दै छु । नेपाली राजनीतिमा के छैन र ? जे चाह्यो त्यही छ । धर्म कर्मदेखि अपराधसम्म मौलाएर पलाएको छ । गरिब धनी भएका छन्, धनी गरिब भएका छन् । भनौ राजनीतिले राजनीति गर्ने मान्छेलाई उल्टो सुल्टो सबै काम गर्न सिकाएको छ । त्यति नगरी राजनीति गर्नेहरूको धोक्रो पनि भरिन्न र समाजमा नाम पनि कमाइदैन । समाजमा उल्टो नाम कमाइएन भने राजनीति गरेको के अर्थ भो र ?
मान्छे समाजमा जन्मिएर समाजलाई नै छायामा पार्ने गरी समाजको माया मारेर दायाँ वाँया गर्दै बिना लगामको घोडाझैँ भएर हिँडेको छ । राजनीतिमा लगाम वा अङ्कुशको महत्त्व नराख्नेहरू समाजका छाडा साढेझैँ हुन्छन् । उनीहरू राजनीतिलाई कचौरा बनाएर खाने थालमा पिसाब फेर्छन् । पानी खाने ग्लासमा आची गर्छन् भने तरकारी खाने प्लेटमा चुठछन र फेरी त्यसैमा खान्छन् । कति गजबको राजनीति गर्छन् नेपालीहरूले हेर्नुस् त ? विश्वमै नभएको हाडी घोप्टे राजनीति नेपालमा । यो कुरा गिनीज बुकमा लेखाए पनि हुने नि राजनीति गर्नेहरूले । तर राजनीतिगर्नेहरु म जस्तो गोज्याङ्ग्रे छैनन् । टाठाबाठा छन् , खाइलाग्दा ज्यान परेका छन् म जस्तो र्याले, सिँगाने छैनन् त्यसैले राजनीतिका ठाउँमा भाजनीति र लाजनीति पनि गर्छन् । सन्तान दर सन्तान सबै पाल्छन लाजनीतिकै भरले र डण्डे राजनीतिका भरौटेहरु समाजमा साढेझैँ डुक्रिन्छन ।
झण्डाको राजनीतिभन्दा बढी डण्डाको राजनीतिले नेपालमा स्थान पाएको छ । जसका कारण नेपालको राजनीतिक दलहरूको झण्डा दुरुपयोग भएको छ मनपरी तवरले । भनौ नेपालमा बेला कुबेला झण्डाको राजनीति पनि हुन्छ । झण्डाको राजनीति सही तवरले हुने हो भने समाजले भिन्न रूप लिइसकेको हुन्थ्यो होला । तर यहाँ अस्तिदेखि आजसम्म नै झण्डाको राजनीतिले स्थान पाएका कारण झण्डाको दुरुपयोग भएको छ । जिउँदो व्यक्तिसँग राजनीति गर्नेहरूको भन्दा मृतकसँग झण्डाको राजनीति गर्ने दलहरूको बाहुल्यता रहेको छ । समाजमा जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि जिउँदोमा मतलब राखिँदैन । देशका लागि उसले गरेको योगदानको मूल्याङ्कन हुँदैन , समाज र राष्ट्रका लागि उसको योगदान अपरिहार्य छ । तर ऊ छायामा पर्छ राज्यबाट र राज्यका निकायहरूबाट अनि राजनीतिबाट पनि । किनभने उसले कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको छैन र लिन चाहँदैन पनि । ऊ लास भएपछि भने दलहरू बिचमा होडबाजी चल्छ उसको मृत शरीरमा आ आफ्नो दलको विकृत र दूषित झण्डा ओढाउन ।
म राजनीति बुझ्दिन र मलाई राजनीति हावा जस्तो लाग्छ । हावामा उडन नसक्ने मान्छे भएकोले होला मैले राजनीति नबुझेको । साँच्चै भन्ने हो भने राजनीतिले हामी मतदातालाई हावामा बेलुनझैँ उडाएर तल खसालेका छन् । हावा भरिएको बेलुन उडाएर माथि पुगेपछि हावा फुस्काएर सास विहीन अवस्थामा तल झारेर फाल्ने राजनीति चलनलाई पालेका छौ हामीले । नेपाली राजनीतिको विशेषता नै हो यो । राज्यको नीति नियमसँग मेलखाने वा राज्यलाई प्रत्येक काममा सहयोग गर्ने राजनीति हुनु पर्ने ठाउँमा राज्यलाई असर पर्ने गरी र समाजलाई घात हुने खालको राजनीतिले राष्ट्रलाई अघि बढन दिइरहेको छैन । भनाँै दलहरूले राजनीतिका नाममा राज्य उपर डण्डा चलाएका छन् र झण्डालाई लुकाएका छन् । लुकाएको झण्डा त्यति बेला निकाल्छन् जो गैर राजनीतिक छ र उसको समाजमा इज्जत मान प्रतिष्ठा छ उसलाई आफ्नो दलको झण्डा ओढाएर लाससँग राजनीति गर्नेहरूको जमातमा हामी हराएका छौ । हामी एकैचोटी दलको लथालिङ्ग झन्डाले बेरिएर चितामा उत्तानो अवस्थामा हुन्छौ । भनौ हामी डण्डेहरु मृत भएपछि झण्डे हुन्छौ । जीवित हुँदा जीवनभरी राज्य र दलहरूबाट झण्डा खाएर बाँचेको मान्छे मृत्यु पश्चात् झण्डाले बेरिएर मरेपछि डुमै राजा भनेझैँ हामी सम्मानित हुन्छौ ।
सम्मानित हुन सबैलाई रहर हुन्छ र मन पनि लाग्छ । कस्तो व्यक्तिको मृत्यु पछि कुनै दलको वा राष्ट्रिय झण्डाओढाएर सम्मान गर्ने वा अपमान गर्ने त्यसको मापदण्ड राजनीतिक दलले वा राज्यले निर्धारण गर्नु पर्छ तर गरेको पाइँदैन । रक्सी खाएर मर्नेलाई पनि यो मेरो दलको योद्धा हो भनेर दलको छलछाम युक्त झन्डा ओढाएको छ । जीउदोमा उसलाई न त्यो दलले न हाम्रो दलको कार्यकर्ता भन्यो न राज्यले नेपाली नागरिक भन्यो । कोही भीरबाट लडेर मर्छन्, कोही दुर्घटनामा परेर मर्छन्, कोही विष खाएर मर्छन्, कसैलाई अपराधीहरूले मार्छन्, कोही झुण्डिएर मर्छन् । कोही डाक्टरले उपचार गर्दा गर्दै मर्छन्, कोही नेतासँग आन्दोलनमा उत्रँदा आफ्नै नेताद्वारा गोली हानेर मारिन्छन् । कोही यातायातका साधनबाट मारिन्छन् । कोही श्रीमतीद्वारा मारिन्छन्, कोही श्रीमान्, बाबु छोरा, हजुर बा आमा दाजुभाइबाट मारिन्छन् त कोही एकापसमा झगडा गरेर मर्छन् । के ती सबैलाई झण्डा ओढाएर सम्मान दिने दलहरूको कुनै नीति नियम छ भने त्यो सार्वजनिक हुनु पर्‍यो । वा राज्यको नै कुनै त्यस्तो मापदण्ड छ भने त्यो पनि सबै जनताले थाहा पाउनु पर्‍यो यो थाहाको देशमा ।
जीउदोमा झण्डा नदेखेकाहरूले मृत्यु पश्चात् झण्डा देख्न पाउनु पनि एउटा ऐतिहासिक घटना नै हो । झण्डा मुनि बसेर डण्डा देख्नु झण्डा देख्न नपाउनु भनेको हामी नेपालीहरूको अहोभाग्य नै हो । मृत्यु जुनसुकै तरिकाले होस झन्डा ओढायो शहीद घोषणा गर्‍यो । तर म चाहिँ के भन्छु भने म जुनसुकै दलबलको वा छलकपटको राजनीतिक हैसियतको भए पनि मेरो मृत्यु पश्चात् मेरो लासमा राष्ट्रियझण्डा बाहेकका दुर्गन्धित झण्डा ओडाएर मेरो विशुद्ध मृत आत्मालाई प्रदूषित नबनाई दिन म सबैमा लाजनीतिक अनुरोध गर्दछु । राजनीतिक अनुरोध गरुँ भने मेरो राजनीतिक हैसियत नै छैन र राजनीतिले मलाई चिन्दैन । भनौ नेपालाँ जनता चिन्ने हैसियतको राजनीति हुन सकेको छैन । यत्रतत्र लाजनीति मात्रै हुने गरेकोले मेरो लासमा छलकपट युक्त दलबलको झण्डा ओढाएर म मृतक आफैलाई लाज लागेर आउने सम्भावना बढेकोले लाजनीति अनुरोध गरेको हुँ ।
बाह्रैमहिना बाह्रैकाल मेरो देसमा विभिन्न भेषधारी लाजनीति कर्ताहरूले लासमाथि राजनीति गर्ने गरेको उज्यालो कुरालाई औँसीको रातमा परिणत गर्ने दुष्चक्र नहोस् । जनता जनार्दनको मृत्यु हुँदा यो देशको जनता जनार्दन भएर मर्न पाउन पर्छ । कुनै लाजनीतिक वा आवरण राजनीतिक दलबलको होइन । अर्को कुरा यहाँ लासमाथि गाईजात्रा मनाउने चलनले साँढेहरू रुष्ट भएको कुरालाई बिर्सनु हुँदैन । हामी सर्वसाधारण नेपाली सबैका साझा मतदाता हौ । हामी सामान्य नेपाली नागरिकहरू कुनै दलका हुँदैनौ र हाम्रो मृत्युपछि हामीलाई कुनै पनि दलको झण्डा ओढाएर बखान गर्न वा हाम्रो बारेमा कुनै पनि प्रकारको गीत गाउन पाइँदैन । चेतना भया ।
देश पनि खायौ तिमीले
मेस पनि खायौ तिमीले
भेषधारी हुन्छौ किन
न लुकाई कुरा तिमी
सत्य तथ्य भन ।
सुत्केरी नि तिमी हुने
विजुली नि तिमी चोर्ने
संसद्मा कुर्सी भाँच्ने
ब्रिफकेस नि खोस्ने ।
आफू खुसी साँढे हुन्छौ
नियम कानुन कुल्चिएर
चाहिँदैन यस्ता नेता
बस्छौ बरु छुट्टिएर ।
कुरा गर्छौ अधिकारका
काम भने प्रतिकारका
कस्ता नेता जन्मिएछन्
मोसो दलि खेदनु पर्ने ।
मतदातालाई डण्डा लाउँछन्
आफू मरे झण्डा ओढछन ।
जालझेल कालो काम नियति नै बाङ्गो
आउँछ दिन घुमीफिरी अनि हुन्छन् नाङ्गो ।
11 August, 2020 8:47 am
मर्छ होला तड्पी यो कृष्ण, राधा तिमीबिना । पुर्‍याएनी स्वर्गै
8 August, 2020 9:38 am
बि.सं.२०५० को दशक उत्तरार्ध हुँदै थियो । देशमा जनयुद्ध उत्कर्षमा
8 August, 2020 8:10 am
रेडस्टारका ८ मुक्तक
१. आजकाल खै कसको जीवनमा आकी छौ ? थाहा छैन
8 August, 2020 7:43 am
देशले खोजेको बेला !
जनताको ढुकढुकीमा बस्न पाउनु देश सेवामा रम्न पाउनुमा लाग्छ, हिमाल